Cismaan Aadan Dibi
Cismaan Aadan Dibi "Guniyobaareeg" (HJ)
Ciidamo Daraawiish iyo Bah Geri ah ayaa weeraray dhulbahante galbeed. Ciidaankaas waa la jebshey waxana halkaas gabay ka mariyey Cali Dhuux oo ku taamaya guusha tolkiis haleelay. Cali Dhuux wuxu Carrabka ku godey Habar Jeclo oo uu tilmaamayo in ayaga lagu soo khaldamay balse hadday habar jeclo humaajiyi lahaayeen ay guul la gurya noqon lahaayeen.
Waxa ka mid ahaa gabaygaas Cali Dhuux tirshey.
Cayuun Shacabka wiilkii lahaa shaah ka karinaayo
Waayeelna xeeb uga shir tegey maleh shirshooruuye
Dar aan idin shiddeeyeenba waa naga shisheeyeene
Gabaygaas jawaabtiisa waxa Cismaan suagayey 23 sannadood. Waxay muujinaysaa dhaqan wanaagga gabyaagii hore oo ah inaysan gabayga iska marin jirin ee ay u miidaan deyi jireen oo hadba midhka ay rabaan ay madashii ku habboon ka marin jireen.
Majeerteen (biciidyahan) ayaa ku soo duulay Dhulbahante Galbeed oo indhahoodoo shan ah waxay geel lahaayeen meersaday. Faankii Cali Dhuux iyo faduushii Habar Jeclo u geysey ayay noqotay inuu midhaheeda durduurto. Cismaan Aadan oo tilmaamaya sida loo galay nimankii Dhulbahante kuna diganaya ayaa marshay tix aad u qurxoon oo ay naga soo gaartey erayadani macaanka badani.
Wuxu yidhi Cismaan Aadan (Gun iyo Baar eeg) isagoo warbixin siinaya Salaan Carrabey;
Shangaliyo Dhulmahantoo fadhiya shiilcaskiyo ceelka
Ayadoo shirkoodii dhan yahay sheybe iyo wiilba
Shanbacood la naar nimanku waa shiqibka Daaroode
Ka shakiye? markii loogu yimi sheedda Dhagaxley'e
-------------------------wadnaha shiil Allaw dhigaye
Shullaweynta rer hagaar ma gelin shaaxin dirirtede
Shuhuboobe nimankii lahaa shayga saa'idahe
Oo geelayaga biir la shubay loogu shiikh noqone
Shurbaddii magaaliyo maxaa shaaha lagu fuudi
Sharafmaa hablii Khaalid dhalay lagula sheekaysan